Lacagta uu ninkaan ku qamaaray waa mid aan caqliga galayn | Somaliska
Nin ganacsade Swedish ag ayaa shirkada qamaarka ee Betsson dacwad ka gudbiyay, isagoo ku eedeeyay in ay ku qaldeen xayeysiintooda. Ninkaan oo magaciisa la qariyay ayaa lacagta uu ku qamaaray muddo afar sano ah ay tahay mid la yaab leh. Ninkaan oo u waramay wargeyska SvD ayaa sheegay in uu maalin kasta ku qamaaray 200.000 kr isaga oo isticmaalaya internet-ka.
Guud ahaan waxa uu ku qamaaray 8 milyan oo kr isagoo dhamaan lacagtaas ayuu ka qariyay shaqaalaha iyo asxaabtiisa. Ninkaan ayaa sheegay in shirkada Betsson ay markasta oo uu qamaaro telefoon ku soo wici jireen, iyagoo ku dhiiri galin jiray in uu sii wado qamaarka.
Dad badan oo ku nool Sweden ayaa qamaarka uu ku noqday balwad, iyagoo lacag badan uga qasaarto.
Cunsuriyiinta SD oo is cadeeyay
July 28, 2016 at 18:16
Nin qamaaray maxaa naga galay. Wax macno leh soo qor.
Awalba Faaraxey ayaa aheyd.
July 29, 2016 at 12:32
Kkkkkkkkkk Nin swedhish ayaa qamaaray miyee sheekada maroosaa, war umada kadaa lug gooyada iyo waxa aan micnaha lahayn